Safaaradda Mareykanka ee Kampala oo ka digtay weeraro argagixiso oo ka dhaca dalka Uganda – Radio Muqdisho
Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin la xiriirta suurtagalnimada weeraro ka dhaco magaalada Kampala ee dalka Uganda.
War ka soo baxay Safaaradda Mareykanku ku leeyahay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta u dhalatay Mareykanka aysan tagi karin goobaha Bulshada ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale goobaha baararka ah ee lagu caweeyo.
Safaaradda ayaa sheegtay inay heshay macluumaad ku saabsan weeraro ka dhici rabo dalka Uganda, waxaana sidoo kale digniintaan ay u jeedisay muwaadiniinta reer galbeedka ah ee ku sugan dalka Uganda, iyadoo kula talisay inay galaan feejignaan dhanka ammaanka ah.
Dhinaca kale Safaaradda ayaa ku wargelisay muwaadiniinta Mareykanka ah ee dalkaasi tagaya, ineey si deg deg ah Safaaradda ula xiriiraan si loogu sheego macluumaadka dhanka ammaanka ah ee Safaaradda ay hayso.
Safaaradda ma aysan sheegin cidda qorsheynaysa weeraradaan ay heshay macluumaadkeeda, hayeeshe waxa ay bixisay kaliya digniinta ay u jeedisay muwaadiniinta dalkaasi u dhalatay iyo kuwa reer galbeedka ee Kampala ku nool.
Mareykanka ayaa dhawaan si KMG ah u xiray Safaaradda uu ku leeyahay dalka Jabuuti, sidoo kale Mareykanka wuxuu xiray dhamaan Qunsuliyadihii uu ku lahaa dalka Sacuudiga, sababo ammaan awgeed.